Android 7.1.1 ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်လုံခြုံရေး patch ဖြင့်ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည် Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | လုံခွုံရေး, လဲ tutorial
Vodafone Australia ၏အဆိုအရ Nexus ထုတ်ကုန်များအတွက် Android 7.1.1 ကိုဖြန့်ချိခြင်းသည်ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်သတ်မှတ်ထားသောလုံခြုံရေး patch ဖြန့်ချိမှုနှင့်တိုက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Android5developer များအတွက်ဒုတိယ beta ပြီးနောက်နှစ်ပတ်အကြာတွင် OTA မှတစ်ဆင့် update ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Nexos သည် Pixel နှင့် Pixel XL နှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအဆင့်အဆင့်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
Pixel ထုတ်ကုန်သစ်များအတွက်ပထမဆုံးရရှိနိုင်သည့် Android 7.1 ကို developer preview မှတစ်ဆင့် Nexus 5X နှင့် 6P နှင့် Pixel C တို့သို့သွားခဲ့သည်။ ဒုတိယ version မှာကျန်ဖုန်းများနှင့် Android One များအတွက်အထောက်အပံ့များထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်ထားသော်လည်း HTC မှပြုလုပ်သော Nexus9ကိုသာထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဗားရှင်း ၂.၂ developer များအား app shortcuts များထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားပြီး keyboard support သည် Gboard မှ Android သို့ GIFs နှင့်ကြွယ်ဝသော content များအတွက် input ကိုထည့်သွင်းပေးပြီးလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။။ သို့သော် iOS app နှင့်မတူသည်မှာ developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ app များသို့ support ကိုအထူးထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ Android 7.1 သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအလုပ်အကိုင်များကိုပေးသည့် emojis အသစ်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Vodafone မှတ်စုများအရ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၁၇ ရက်၊ သို့သော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့စွဲဖြင့်ဖော်ပြပြီး Google ၏တနင်္လာနေ့တွင်ပြုလုပ်သောပုံမှန်ပုံစံနှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။
ဗားရှင်း 7.1.1 သည်လုံခြုံရေး patch တစ်ခုထက်မကပါ။ အဆိုပါ OTA နည်းနည်းပိုကြီးသည်, Nexus 650P အတွက် 6MB ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ Vodafone သည်ဤနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် သင့်ရဲ့သြစတြေးလျဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ.
အခြား Nexus ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ Pixel နှင့် Pixel XL တို့သည်လည်း Android 7.1.1 ကိုရရှိရန်စီစဉ်ထားသည်။ အသေးအဖွဲတွေ့ရှိရသောပြissuesနာများအတွက်ပုံမှန် bug ပြင်ဆင်မှုများအပြင် Pixel အသစ်ပြောင်းခြင်းသည်ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရန်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Android 7.1.1 ကိုဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ patch ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်
စူပါမာရီယိုစတိုင်လ်ရှိကြောင်များနှင့်အတူ Super Cat Bros